Ogaden News Agency (ONA) – Qaramada Midoobay oo Isra’iil Ku Eedaysay Deegaamaynta Dhulka Falasdhiin.
Qaramada Midoobay oo Isra’iil Ku Eedaysay Deegaamaynta Dhulka Falasdhiin.
Posted by ONA Admin	/ March 26, 2017
Danjiraha Qaramada Midoobay (QM) u qaabilsan Bariga Dhexe ayaa sheegay in Israa’iil aysan qaadin tallaabooyinkii ay ku joojin laheyd howsha deegaamaynta (Dhismaha Cusub) ee ay ka waddo dhulka Falastiiniyiinta, taasi oo uu dalbaday Golaha Ammaanka.
Danjire Nickolay Mladenov ayaa hadalkan jeediyay mar uu xubnaha Golaha Ammaanka (UN) uu u gudbinayay xogtii ugu dambaysay ee ku saabsaneyd dhaqangelinta go’aankii golahan ee bishii Diseembar ee sanadkii hore 2016, kaasi oo dhigayay in deegaamaynta Israa’iil ay tahay mid xad-gudub ku ah shuruucda caalamiga ah.
Go’aankaasi ayaa la meelmariyay kaddib markii maamulkii Madaxweyne Obama ee Mareykanka uu ka aamusay codka loo qaaday arrintaasi. Hasayeeshe maamulka Mareykanka ee xilligan ayaa dhaliilay qaraarkaasi.
Ergayga QM u qaabilsan Bariga Dhexe, waxa uu u sheegay xubnaha golahan in saddexdii bilood ee la soo dhaafay Israa’iil ay kordhisay howsha deegaamaynta ay ka waddo dhulka Falastiiniyiinta, waxa uuna arrintaasi ku tilmaamay xadgudub ka dhan ah qaraarkaasi golaha ammaanka, kaasi oo uu sheegay in ay tahay mid aad looga walaaco.
Mr. Mlandenov ayaa sheegay in horumarinta kaabayaasha ee qorsheysan, tallaabooyinka ka dhanka sharciga ah iyo tallaabooyinka ballaaran ee lagu burburinayo bulshada Falastiiniyiinta ay caddeyn dhab ah u tahay sida Israa’iil ay uga go’an tahay in ay sii balaadhiso deegaamaynta ay ka waddo dhulka Falastiiniyiinta ee ay xoogga ku haysato.
Danjiraha Israa’iil u fadhiya QM, Danny Danon, ayaa ku diiday xogta uu bixiyay ergaygan Qaramada Midoobay, waxa uuna sheegay in ay khasab tahay in la joojiyo walaaca tirada badan ee QM ay diiradda u saareyso Israa’iil.